Umunwanyi 5 ndi mere ski snow - ULLER
Femalemụ nwanyị 5 skiers mere akụkọ snow
Ọ bụrụ na anyị nwere ihe doro anya, ọ bụ na ụwa a na-achịkwa egwuregwu mgbe niile ka ụmụ nwoke na-achị. Otú ọ dị, nke a apụtaghị na ọnụnọ nwanyị adịghị, kama ọ bụ na a hụbeghị ụmụ nwanyị n'otu ụzọ ma ọ bụ n'otu ọkwa.
Aha ndị dị ka Candide Thovex, Hermann Maier ma ọ bụ Shane McConkey nwere ike ikwu karịa ndị ọzọ dị ka Lindsey Vonn ma ọ bụ Ester Ledecká, ọkachasị ndị na-amachaghị banyere ịgba ọsọ.
N'agbanyeghi otutu ihe nwetakiri na otutu umu nwanyi na-enweta site na nkuzi di iche-iche, o di ka o nweghi ihe di nkpa ka ekwuputa na oganihu kwesiri ya na ogo ha, na, obu ezie na obu eziokwu na N'ime afo ndi a, na-agbanwe, ọ ka na-eme ya na nwayọ nwayọ.
N'ihi nke a, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ụmụ nwanyị na-egwu egwuregwu erughị oke nke ụmụ nwoke, na Uller anyị chọrọ ime mgbanwe, ọ bụ ya mere anyị ji ewetara n'okpuru 5 nke ndị nwanyị na-agba ọsọ ụgbọ mmiri bụ ndị mere akụkọ ihe mere eme na snow n'oge niile dị iche iche ọtụtụ iri afọ.
Anne Marie Moser-Pröll (1953) Nkeji edemede
Ọ bụrụ na anyị laghachi azụ n'oge, ọ dị mkpa iji aha Anne Marie Moser-Pröll amụrụ na 1953. A na-etu aha onye Austria a 'Agụ nke Kleinarl' A na-ewere ya dị ka otu n'ime ndị kachasị egwu na akụkọ egwuregwu. Onye ọkwọ ụgbọ mmiri a pụtara n'ihi na site n'afọ ruo n'afọ ọ kwadoro nduzi ya na njirimara kachasị mma nke ọrụ ya: nchịkwa nke ule ala, ọ bụ ezie na, ekwesịrị ịdeba ama, na ọ kwụpụkwara n'ọtụtụ ndị ọzọ.
N'ime ọtụtụ mmeri ya, ndị ọchịagha 6 World Cup pụtara, ịbụ onye na-agba ọsọ nke natara aha a oge, na mgbakwunye, o nwekwara aha 10 dị iche iche na mmeri 62 na mkpokọta.
N’etiti ihe ndị ọ rụzuru n’egwuregwu Olympic, ọ dị mkpa igosipụta na o nwere ọla ọcha 2 na ọla edo 1 nke o meriri n’afọ 1980 na Lake Placid Winter Olympics, na mgbe nke ahụ gasịrị ọ kpebiri ịla ezumike nká n’ikpeazụ iji rara onwe ya nye ezinụlọ ya nke ọma. na-achọ ịbụ onye gbara afọ iri abụọ na asaa.
Afọ iri bụ oge ọ ga - ewe onye Austrian iji nweta ebe na akụkọ egwuregwu skiing na ịghọ otu n'ime ndị na - eme skiers na - aga nke ọma ga - abụ ọkwa maka ọtụtụ afọ ndị na - abịa.
Nke mba Spanish, Blanca Fernandez Ochoa A mụrụ ya na Madrid na 1963. Ọ bụ ezie na ọ rụzuru ọtụtụ ihe, ndụ ya metụtakwara ndụ ya.
Site na nnukwu nrụgide nke ịbụ nwanne nwanyị onye na-egwu mmiri Francisco Fernández Ochoa, Blanca ghọrọ nwanyị mbụ meriri nrite Olympic, na nke a, ọla nchara, maka Spain na Albertville Winter Olympics na 1992.
Onye ọsụ ụzọ n'ịkwalite egwuregwu ụmụ nwanyị, ndụ Blanca jikọtara ya na snow kemgbe ọ dị obere, ebe ọ bụ na ya na ezinụlọ ya biri na Cercedilla na ndị mụrụ ya rụrụ ọrụ na ebe nchekwa ski Navacerrada. Mgbe ọ dị afọ 8, ọ sonyere na asọmpi mbụ ya na n'agbanyeghị na ọ bụ onye na-enweghị ahụmịhe, o jisiri ike tinye onwe ya n'ọnọdụ nke anọ. Oge a dị oke mkpa na ndụ Blanca, ebe ọ bụ ihe kpatara nwa agbọghọ ahụ ka ọ kwagara afọ atọ ka e mesịrị, gaa na ụlọ ọrụ ọzụzụ na Baqueira Beret.
Na 1978 ọ malitere na asọmpi mba ụwa na site na ebe ahụ, ọ nweghị ihe ọ bụla karịa iwepụta mmeri mgbe mmeri gasịrị, dịka na 1985 mgbe ọ ghọrọ Spanish mbụ na-ebute ụzọ na World Cup.
Mgbe ọ dị afọ 29 na mgbe o meriri ọla kọpa maka Spain na 4 World Cups, Blanca lara ezumike nká mgbe mmeri Baqueira Beret. Na 2019, mgbe ọ dị afọ 56, Blanca furu efu ma ụbọchị ise gachara, ha hụrụ ozu ya na-adịghị ndụ. Onye ski ahụ hapụrụ, ma hapụ ihe nketa maka ịgba ọsọ Spanish.
Amụrụ na Austria n’afọ 1969, Petra Kronberger toro n’ugbo nna nna ya, ebe ndị mụrụ ya na-echekwa ego iji rụọ ụlọ nke ha.
Site na mmalite dị ala, ọ bụ nna ya kụziiri ya ka ọ na-egwu ski mgbe ọ dị naanị afọ 2 na ihe nkuzi ya kwụrụ ụgwọ, ebe ọ bụ na 6 ọ ga-emeri asọmpi mbụ ya. Mgbe ọ dị afọ 10, onye na-ahụ egwuregwu na-ahụ Petra ma mee ka ndị mụrụ ya kwenye na ya ga-agbasi mbọ ike iji ruo ọkwa ọkachamara. Ndị nne na nna Petra, n'agbanyeghị na ha enweghị ike ịkwụ ụgwọ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ nwa ha nwanyị, kpebiri ịga ogologo oge maka ụjọ ịkwa ụta n'ọdịnihu.
Ọrụ Petra Kronberger adịchaghị ogologo, mana n'agbanyeghị nke a, ọ bụ otu n'ime ụmụ nwanyị 5 ndị ​​jisiri ike merie ọzụzụ niile nke World Cup n'otu oge. Agbanyeghị, onye Ọstrịa na-asọmpi naanị maka afọ 5, ebe ọ bụ na n'afọ 1992 mgbe ọ dị afọ 23 ọ kwupụtara ezumike nká ya na-ekwu na ọ na-efunahụ ya maka egwuregwu ahụ.
Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, ọ ghọrọ prọfesọ nke akwụkwọ na akụkọ ihe mere eme nke German wee kwaga Salzburg ebe ọ rụrụ ọrụ na Museum nke otu aha na na Hohensalzburg Castle.
Na 1996, ihe ngosi a nke ski nwere onyinye nke uru, n'ihi na, na mgbakwunye na onyinye ya dị ukwuu maka ịkwọ ụgbọ, Petra masịrị ya maka ịdị umeala n'obi na omume ọma ya.
Amuru na Amerika ma kpokwa ya aha Don don, Lindsey Vonn bụ otu n'ime ndị kachasị ama ama skiers na akụkọ ntolite. Ọnụnọ ya na egwuregwu snow a laghachiri ọtụtụ afọ. Ugbu a ọ dị afọ iri atọ na asaa, mana usoro ịgba ọsọ ya bidoro mgbe ọ dị obere, afọ ole ọ bara na bọọdụ ụfọdụ. Otú ọ dị, ọ gaghị amalite ịsọ mpi ruo mgbe ọ dị afọ 37, mgbe ezinụlọ ya ghọtara na ọ nwere nkà na nke ahụ ga-eme ka ọ pụọ iche na ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na ọ lara ezumike nká ugbu a, mmeri ya dị ọtụtụ na ọ nwere ike ịnya isi na ọ meriri iko Alpine Skiing World Cup ugboro 4. Na Alpine Ski World Championship o nwetakwara ọtụtụ mmeri n'oge ọrụ ya niile, 54 ka ọ bụrụ nke ziri ezi, ma na-edekọ ndekọ ahụ na ala ugwu na nke kachasị elu.
Agaghị echefu ọrụ Vonn, na mgbakwunye na ịnata onyinye Laureus na 2010 maka ịbụ onye egwuregwu kachasị mma, o nwekwara 20 Crystal Globes, iko nke enyere maka inwe akara kacha mma na ọpụrụiche ya.
Naanị mgbe ọ dị afọ 26 ma bụrụ onye a mụrụ na Czech Republic, a na-ahụta Ester Ledecká dị ka otu n'ime nkwa ndị na-eto eto, ọ bụghị naanị banyere ịgba ọsọ ski, kamakwa nke snowboard.Agbanyeghị, mmalite ya nke abụọ bịara ka oge na-aga, ebe ọ bụ na ọ dị nanị afọ 9, Ledecká gosipụtara mmasị dị ukwuu ịbanye na skis ruo mgbe ọ kpebiri ịhọrọ snowboarding mgbe ọ ruru mba ụwa.
2018 bụ afọ nke ọ mere niche na akụkọ egwuregwu n'ihi ekele ya na asọmpi Olympic nke Yeon Chang na South Korea, ebe ọ meriri ọla edo Olympic na Ski Supergiant na Snowboard Parallel Giant, mgbe ọ nụsịrị ọtụtụ oge na ọ ga-ahọrọ egwuregwu n'ihi na ọ nweghị ike ịrụ ọrụ kachasị elu na ọkachamara abụọ.
Ihe a na-achọ ịmata? Enwere mmeri nke Yeong Chang Games na skis nke ndị America gbazitere Mikaela Shiffrinonye gbara arụkwaghịm isonye na afọ ahụ n'ihi usoro ahụ siri ike.
Mgbe nyochachara nkenke banyere ụfọdụ ndụ ụmụ nwanyị ndị mere akụkọ ihe mere eme na snow, ọ ga-edo anyị anya na egwuregwu abụbeghị ihe gbasara ụmụ nwoke, na n'eziokwu, enwere ọtụtụ ndị egwuregwu ndị nwara ịrọ nrọ n'olu dara ụda. mezuo ebumnuche gị mgbe ọtụtụ ndị ekweghị na ọ ga-ekwe omume.
N’enweghi mgbagha, ewepụtara mba anyị ka ike ụwa n’uwa egwuregwu. Ọkachamara egwuregwu ọkachamara nke Spain abụrụla akara mmụta na ọzụzụ dị iche iche, ebe ndị egwuregwu nọ
Miguel Induráin, akụkọ ebighi ebi banyere ịgba Spanish
"Ahụ na-atachi obi karịa uche", kwuru Miguel Induráin, 57, onye mmeri nke Tours de France ise (1991-1995) na Giro d'Italia maka afọ abụọ sochiri (1992 na 1993), Onye Ọchịchị Worldwa
Didn't maghị ihe 11 ndị a banyere Aymar Navarro a ma ama!
Aymar Navarro bụ onye ọsụ ụzọ nke nnwere onwe mba nke na-achọ ibi na "oyi na-adịru ebighi ebi." Onye uwe ojii Val d'Aran (na onye na-ere ọkụ) bụ onye Spen mbụ batara na Freeride World Tour, ebe
Ndị a bụ vidiyo kacha mma nke Aymar Navarro!
Aymar Navarro bụ otu n’ime ndị freeriders kachasị mkpa n’ụwa na freerider kachasị mma anyị nwere na Spain. Amuru na ndagwurugwu Aran, ndu ya raara onwe ya nye icho "oge oyi ebighi ebi". Nwamba a
Mikaela Shiffrin Curiosities na vidiyo ya kacha mma YouTube!
Nwanyị ọhụrụ nke ọgbọ egwuregwu ọcha. Nke a bụ otú e si mara Mikaela Shiffrin na ịwa mmiri Alpine zuru ụwa ọnụ. Onye America ji ụgbọ mmiri bụ Mikaela Shiffrin jisiri ike tie ihe ndekọ niile ahụ
Mikaela Shiffrin Nwanyị ọhụrụ nke ọgbọ egwuregwu ọcha!
Ọ bụrụ na anyị ga-ekwu maka ụmụ nwanyị na-eme ski, anyị enweghị ike ịkwụsị ikwu maka American Mikaela Shiffrin, onye meriri akara ọla edo abụọ nke Olympic, atọ World Championship, Gene atọ
Aymar Navarro Onye freerider kacha mma na Spain!
You ma onye Aymar Navarro bụ? Fọdụ na-ekwu na ọ bụ freerider kachasị mma na Spain, ndị ọzọ na-ekwu na obi abụọ adịghị ya na ọ bụ mgbape, gịnị ka ị chere? Amuru ya ma tolite na ndagwurugwu Aran ma bụrụ ihe niile
Ihe 10 ị nwere ike ịmaghị banyere onye na-agba ịnyịnya bụ Tadej Pogačar
"Onye na-eri anụ" ... ọ bụrụ na onwere ihe ndị Slovenia mara nke ọma, ọ bụ maka ugwu na mkpọda ugwu. N'ezie, nke a bụ ebe amụrụ nke otu n'ime ndị kacha mkpa na ndị ọkachamara na-agba ịnyịnya ígwè n'oge ndị a.